ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ (အပိုင်း-၄) | ပျူနိုင်ငံ
ယခင်အပိုင်း(၃)မှ အဆက် …
သမိုင်းသင်တယ်ဆိုတာ “ မအ ” အောင်လို့ ဆိုပြီး သမိုင်း ပါမောက္ခကြီး ဆရာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ပစ္စုပန်တည့်တည့်ရှု့ပါဆိုတာ လောကုတ္တရာအရမှန်ပေမဲ့ လောကီခရီးစဉ်မှာတော့ အတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဟာ သိပ်အရေးပါလှပါတယ်။သမိုင်းကိုချန်လှပ်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂါတ်ကိုလှမ်းဘုို့ဆိုတာ ဆားမပါတဲ့ဟင်းတခွက်ကိုစားရသလိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ မနက်စောစော ကျနော့်ဆီကို ကိုသွေးတို့ လေးယောက်သားအုပ်စုရောက်လာကြတယ်လေ၊သူတို့ပြောပြမှ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကြွေးဖိတ်ထားလို့သွားကြမလို့တဲ့..အကို့ကိုလည်းဖိတ်ခိုင်းလို့လာခေါ်တာတဲ့..မြို့မရပ်ကွက်ထဲက မသီရိစု တို့အိမ်မှာ..ကျနော် သီရိစုကို သိနေတာတော့ကြာပါပြီ..သူက နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမြဲတက်ကြွနေတတ်သူတယောက် နောက် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတယ်၊အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတတ်တယ်၊ ထက်အောင် ကတဆက်ထဲ..မက်ဆေ့တခုပါထပ်ပေးလာတယ်..ကျနော်တို့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးဘို့ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာစီစဉ်ထားတယ်တဲ့…ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လူငယ်အုပ်စုတွေနဲ့ထလိုက်လာခဲ့တယ်….ဘုန်းကြီးဆွမ်းကြွေးတဲ့ သီရိစုတို့ အိမ်ရောက်တော့ လူလည်းသိပ်မရှိတော့ပါဘူး….သူကကျနော်တို့ အုပ်စုကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုရင်း….
“ ချမ်းမြေ့တို့အုပ်စုတွေ လာမှလာပါ့မလားလို့..ငါဖြင့်မျှော်နေလိုက်ရတာ..တခါတည်း ကိုမောင်မောင်ဝမ်း ပါခေါ်လာတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာဟယ်….နောက်တောင်ကျနေတယ်.. ” သီရိစုကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးပွဲတွေကိုပြင်ရင်းပြောနေတော့ စန်းမောင်က……
“ အင်း..နောက်ကျသွားတော့ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်တော့….ရေရောပြီးလောက်ပြီးထင်တယ်..”
“ စန်းမောင်ရယ်..ငါနင်တို့ဘို့ သီးခြားကိုဖယ်ထားတာ..မပူပါနဲ့..ရေမရောပါဘူး..စိတ်ချပါ…ရေနွေးပဲရောတာပါ ” အားလုံးပွဲကျသွားကြတယ်..အညာမုန့်ဟင်းခါးကိုအားရပါးရစားအပြီးမှာတော့..သီရိစုက…ကျနော်တို့အားလုံးကို သူ့အိမ်အပေါ်ထပ်ခေါ်သွားပြီး လဘက်ရည်၊ အချိုပွဲတွေနဲ့ဧည့်ခံတယ်..
“ ဒါက..အထူးအစီအစဉ်လေ….အောက်ထပ်မှာဆို..ဧည့်သည်တွေလာရင်..စကားကောင်းကောင်းပြောလို့မရမှာဆိုးလို့..အ ပေါ်ထပ်မှာ စီစဉ်ထားတာ…နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းလေး..လုပ်ချင်နေတာကြာပြီ…အခြေနေမပေးတာနဲ့..မလုပ်ဖြစ်သေးတာ..ထက်အောင် တောင်ပြောမိသေးတယ်..အမ..တို့မိန်းခလေးတွေမှာခက်တယ်..ယောကျာင်္းလေးတွေလို..လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဘို့က လည်းမသင့်တော်ဆိုတော့..ငါ နင်တို့နဲ့ရော..အကို..ကိုမောင်မောင်ဝမ်းနဲ့ရော နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတာတွေ အရမ်းနားထောင်ချင်တာဟယ်….” သီရိစုက လဘက်ရည်ခွက်ထဲကို လဘက်ရည်လိုက်ဖြည့်ပေးရင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့…
“လောကမှာ အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့..ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေက..ပြန်ဖျက်လို့ရတယ်..” ကျနော်စကားစလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..အားလုံးက လဘက်ရည်ခွက်တွေကိုသောက်မလို့ဟန်ပြင်ရင်းကနေ နားစွင့်လိုက်ကြတယ်…
“ မပြဌာန်းပဲနဲ့ တည်နေတဲ့ ဥပဒေကဖျက်လို့ကိုမရဘူး…” ဆိုတော့ စန်းမောင်က..လဘက်ရည်ခွက်ကိုချလိုက်ပြီး
“ အကို..ဘာကိုဆိုလိုတာလည်း..ရှင်းပြပေးပါ့လား ”
“ ဒီလိုကွာ..ဥပမာ…ဥပဒေတခုကို အစိုးရက ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်က ပြဌာန်းလိုက်ပြီဆိုပါတော့…အဲဒီ ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်တော့တဲ့ အခါ ပြန်ဖျက်လို့ရတယ်…တို့ အခု နအဖက ပြောနေတဲ့ ဟာတခုကွာ…လွှတ်တော်ထဲကို အလိုအလျှောက် စစ်ဗိုလ် တမတ်သား ( ၂၅ % ) ပါရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ…ဒါကို တချိန်မှာ..အားလုံးက လက်မခံနိုင်လို့ ပယ်ချမယ်ဆို..ပယ်ဖျက်လို့ရတယ်ကွ….”
“ ဒါ ..ရ..ရမှာပေါ့ အကိုရ..မရလို့ဘယ်ဖြစ်မလည်း..ကျနော်တို့ ၀ိုင်းကြိုးစားရမယ်…” ကိုသွေးက ပျာရိပျာယာဝင်ပြောလိုက်တယ်…
“ မှန်တယ်…ဒါ ပြဌာန်းထားတဲ့ အရာ..တနည်းအားဖြင့် နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေက ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ..လိုက်နာတဲ့သူတွေ ရှိသလို မလိုက်နာတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတာပဲ…ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူက ပြဌာန်းထားမှန်းမသိတဲ့ ဥပဒေကြ..အားလုံးလိုက်နာကြရတယ်ဗျ.. ဖျက်လို့လည်းမရဘူး….ဥပမာကွာ..ယောကျာင်္းတို့မျက်ရည်မြေ၀ယ်မကျကောင်း ဆိုတာမျိုး…ဘယ်သူက ပြဌာန်းသွားမှန်းလည်းမသိဘူး..တို့အားလုံးကလည်း တသွေမတိမ်းကို လိုက်နာနေကြရတာ…” ကျနော့်စကားအဆုံး အားလုံးရီကြတယ်…ချမ်းမြေ့က…
“ ဟေ့ကောင်..ငါ့ကို စွတ်အထင်မကြီးနဲ့ဦး..အဲဒါ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး..စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းပြောတာ..အခုလည်း..သီရိစုပြောတာ ငါစဉ်းစားမိလို့ပါ…မိန်းခလေးတွေ လဘက်ရည်ဆိုင်မထိုင်ရလို့..ဘယ်သူကပြဌာန်းသွားမှန်းမသိဘူး..ဖျက်လို့လည်းမရဘူး..အားလုံးသောမိန်းခလေးနီးပါးမျှ..ဒီဥပဒေကို လိုက်နာနေကြတာဗျ ..ဟား..ဟား… ” ကျနော်ကပြောပြောဆိုဆို ရီမိလိုက်တယ်..ရီသံအဆုံးမှာ…စန်းမောင်ကစကားစလာတယ်…
“ အကို..ဒီနေ့..ဘယ်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးမယ်လို့ စဉ်းစားလာလည်း ”
“ ဒီနေ့..ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံဆိုတာ..ဘာလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးချင်တယ်..ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့..ဒီနေ့နိုင်ငံရေးလှုတ်ရှားမှု့တော်တော်များများမှာ..ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ဂယက်ဟာအဓိက ကျတယ်ဆိုမမှားလောက်ပါဘူး…ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကနေ..လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ တော်တော်များများကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်..စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်..ဒီမိုကရေစီရေးးလှုတ် ရှားမှု့တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်…ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုတော့ ဖြုတ်မချနိုင်သေးဘူး..အခုထိပေါ့ကွာ.” အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားမှင်သက်နားထောင်နေရာမှ…ချမ်းမြေ့က.
“ ကျနော်တို့က ရှစ်လေးလုံးဖြစ်တော့ ကလေးတွေပဲရှိသေးတယ်..ဘာမှကိုကောင်းကောင်းမသိတာ…အခုနောက်မျိုးဆက်တွေဆို ရှစ်လေးလုံးပြီးမှမွေးလာတာတွေများတော့..လုံးလုံးကိုမသိသလောက်ပဲအကိုရေ..နောက် ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်အာဏာရှင်နဲ့လက်ပါးစေတွေက..အမျိုးမျိုးပုံဖျက်ကြတော့..လူငယ်တွေတော်တော်များများခမျာ..သို့လော..သို့လော တွေဖြစ်နေကြတယ်..ဘယ်ဟာကိုယုံရမှန်းမသိဘူး..စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကလည်းမရှိဆိုတော့..သမိုင်းတွေပျောက်..ပြောင်းတည်းပြောင်းပြန်တွေဖြစ်တာကဖြစ်နဲ့….ကျနော်တို့ဆို သိချင်တာမှ တအားပဲ ..”
“ ငါ တတ်နိုင်သလောက် သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကို ဖတ်ခဲ့ရတာတွေရော၊သူများအတွေ့အကြုံတွေရော၊ကိုယ်တွေ့တွေရောပေါ့ကွာ….လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီသမိုင်းကိုသိထားသင့်ပါတယ်..အပြည့်စုံမဟုတ်တောင်..တစိတ်တဒေသပေါ့….တကယ်တော့ ၈၈-အရေးတော်ပုံကြီးက ရုတ်တရက်ဝုန်းကနဲ ကောက်ကာငင်ကာဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး..ဒီလိုအားကောင်းလာဘို့အတွက်..နှစ်ပေါင်းများစွာ သန္ဓေတည်လာခဲ့တာပါ…..ပြောမယ်ဆို.. တို့နိုင်ငံက..၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခေတ်ကို ၁၄နှစ်လောက်တော့ ဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်..၁၉၆၂ ထိပေါ့..အဲဒီ့ကြားကာလမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မညီညွတ်မှု့တွေ..အယူအဆပြင်းထံမှု့တွေကြောင့်..ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေ..စစ်အာ ဏာရှင်လက်ထဲရောက်ခဲ့ရတယ်..တကယ်တော့..အဲဒီကာလက..စစ်ဗိုလ်တွေကို..နိုင်ငံရေးမှာနေရာပေးပြီး ပုခုံးထမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့..နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ကွ….” ကျနော်ကစကားအဆုံး..သောက်လက်စကျန်နေတဲ့..လဘက်ရည်တကျိုက်ကို မော့လိုက်အပြီး..နားထောင်နေတဲ့ လူငယ်တွေ လှုတ်တိလှုတ်ရွဖြစ်လာတာကိုသိလိုက်တယ်….
“နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်…၁၉၆၂မှာ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစုက အာဏာသိမ်းလိုက်တော့..အဲဒီကာလက ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးနုဆို ဘယ်လောက်ထိခံလိုက်ရသလည်းဆိုတော့..သူ့ကို ဖမ်းအပြီး..သူကတခြားသူတွေကိုမေးတယ်.ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကိုလည်း ဘယ်မှာ ဖမ်းထားသလည်းတဲ့..ကဲစဉ်းစား သာကြည့်ပေတော့..ဦးနုက..သူ့ကိုဖမ်းတာ…ဗိုလ်နေ၀င်းလို့တောင်မသိရှာဘူး..သူ့စိတ်ထဲမှာ ဗိုလ်နေ၀င်းလည်း သူတို့နဲ့အတူရော အဖမ်းခံရတယ်ထင်တာ..ဦးနေ၀င်း ( ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ) က အဲလို ပိပိယိယိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကို..အယုံသွင်းပြီးမှ..လုပ်ချလိုက်တာ..အပိုင်ကို အာဏာသိမ်းပစ်လိုက်တာ…အဲဒီကစလိုက်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဟာ..အခုထိတိုင်ကို အဆုံးမသတ်သေးဘူးဆိုပါတော့ကွာ..”
“အေးပေါ့..ဘယ်လိုပဲ နံမည်တွေပြောင်းလာပြောင်းလာ..စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကတော့ပြောင်းလည်းမလာခဲ့ပါဘူး..အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို မိုင်းဗုံးထောင်ဖြိုပစ်လိုက်တယ်လေ..ရဟန်း ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအများကြီး အသက်ပေးခဲ့ရတာပေါ့…လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကစလို့..သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားမဂ္ဂ ဟာ..တရားဝင်ရပ်တည်နေရာကနေ..တရားမ၀င်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်…အဲဒီကနေ အဆက်ဆက် လူထုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွဲလာလိုက်တာ..ဦးသန့်အရေးခင်း၊မှိုင်းရာပြည့်အရေးအခင်း တော်တော်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….ဒီလိုနဲ့..၁၉၆၂ ကစစ်အာဏာသိမ်း ဗိုလ်နေ၀င်းအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ပုံသွင်းခဲ့တယ်..မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဆိုတဲ့ တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းနဲ့..တိုင်းပြည်ကိုချီတက်ခဲ့တာပေါ့….အာဏာသိမ်းပြီးလို့သိပ်မကြာတယ်ဆိုရင်ပဲ..တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိလိကပိုင် အခန်းကဏ္ဍကိုချက်ခြင်းဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်..ပုဂ္ဂိလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက် တယ်….ပိုင်ဆိုင်မှု့စည်းစိမ်းဥစ္စာတွေ အသိမ်းခံလိုက်ရတယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာ နည်းလားကွာ..တနိုင်ငံလုံးပဲ..”
“ ဟုတ်တယ် အကို ..ကျမ တို့အဘိုးပိုင်ခဲ့တဲ့ ရေနံတွင်းတွေတောင် ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံလိုက်ရတာ..အဖွားဆို ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးသွားတာ..ပြန်တွေးကြည့်ရင်ရင်နာစရာကြီးနော်..လူတွေ သွေးတွေချွှေးတွေနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ ဥစ္စာဓန ကို ဓါးပြတိုက်ယူလိုက်သလိုပဲ ” သီရိစု ရဲ့စကားသံတွေထဲမှာခံပြင်းဒေါသသံတွေပါလာတယ်…
“ လက်ဝဲစနစ်ရဲ့လူတန်းစားညီမျှရေးမူကလည်း စလာလာခြင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းလိုက်သလိုပဲနော်…လူထုက အနှစ်နှစ်အလလ သွေးတွေချွှေးတွေနဲ့ရုန်းကန်ရင်းရလာတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို ..သိမ်းပြီးမှ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်တယ်ဆိုကထဲက ..အစမကောင်းတော့တာ သေချာနေသလိုပဲ..”
“ စန်းမောင်ပြောမယ်ဆိုလည်းပြောလောက်ပါတယ်…နောက်ဒီထက်ထပ်ဆိုးသွားတာက ..တံခါးပိတ်စီးပွားရေးမှုဝါဒကိုကျင့်သုံးလိုက်တာပဲ..”
“ တံခါးပိတ် စီးပွားရေးမူဝါဒဆိုတာ..ဘာလည်း အကို ” ထက်အောင်ကမေးလိုက်တော့…
“နိုင်ငံတကာက တို့နိုင်ငံကို စီးပွားရေးလာရင်းနှီးမြူတ်နှံမှု့မှန်သမျှ..လက်မခံတော့ဘူး…ကိုယ့်လူထုရဲ့အားနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုထူထောင်မယ်..ဆိုရှယ်လစ်လူ့ဘောင်ဆီကို အရာက်လှမ်းမယ်ပေါ့ကွာ….” အဖြေကိုကျေနပ်သွားဟန်ရှိတဲ့ ထက်အောင် ကခေါင်းလေးတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့….
“ပြောမယ်ဆို တိုင်းပြည်က တဖြေးဖြေးနဲ့ ဆင်းရဲတွင်းနက်လာလိုက်တာ..ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှု့အနိမ့်ကျဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထဲမှာပါသွားတယ်..ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၇ လောက်မှာ အစိုးရကနေ လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေကို တရားမ၀င်ငွေစက္ကူများအဖြစ်အမိန့်ကျေငြာစာနဲ့ ကျေငြာလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့..လူထုရဲ့ဒေါသတွေဟာ..အထွတ်အထိပ်ထိရောက်သွားတယ်ပဲပြောပါတော့…လူတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေကြေးတွေဟာ..သာမန်စက္ကူစုတ်လောက်တောင်တန်ဘိုးမရှိဖြစ်သွားခဲ့တယ်လေ..ဒါပေမဲ့လည်း လူထုကြီးက၀ုန်းကနဲပေါက်ကွဲထွက်မလာသေးဘူး….ဒေါသတွေကိုမြိုသိပ်ထားကြတယ်….ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတ်လ ထဲမှာ ရန်ကုန်စက်မှု့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့..အရပ်သားတွေ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာရန်ဖြစ်ရာကအစ..အုံကြွမှု့တွေဖြစ်လာတော့..အစိုးရက ကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခပ်နှိမ်နင်းတယ်..အဲဒီလိုနှိမ်နင်းတဲ့အတွက် ..အခုမင်းတို့လည်းကြားဘူးပါတယ်..ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်နဲ့ ကျောင်းသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်…အဲဒီဂယက်ဟာ..ရန်ကုန်စက်မှု့တက္ကသိုလ်ကနေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ( ပင်မ ) အပါဝင် ကျောင်းအသီးသီးကို ကူးစက်သွားပြီး…ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..တခါ အဲဒီကျောင်းသားတွေကိုပါ အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့လို့..ကျောင်းသားအများအပြားသွေးမြေကျခဲ့ရပြီး..ရာနဲ့ချီအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်…ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်…အဲဒီလှုတ်ရှားမှု့များဟာယာယီအားဖြင့်တော့ ခနငြိမ်သွားတာပေါ့…ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၈ ဇွန်လ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမှု့တွေကို ပြန်လည်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ကြတယ်..ဇွန်လ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမှု့မှာ တခုထူးခြားတာက..ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို..အစပျိုးခဲ့တာရယ်..ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံကြီးကနေ..တနိုင်ငံလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပေါ် ပေါက်ဘို့ကို မှုချမှတ်နိုင်ခဲ့တာတွေကတော့..ကျောင်းသားတွေရဲ့မှတ်တိုင်တခုပေါ့ကွာ…အဲဒီကစလို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ရောက်လာပြီး…မတရားမှု့မှန်သမျှကိုတော်လှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေကိန်းအောင်းလာကြတယ်…ဇွန်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမှု့ကိုလည်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြန်တယ်..ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဒီလှုတ်ရှားမှု့မှာလည်း အသက်တွေပေးခဲ့ရပြန်တယ်..ကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်လို့ နယ်အသီးသီးက ကျောင်းသားတွေအိမ်တွေပြန်ကြတော့..အားလုံးရဲ့စိတ်တွေထဲမှာ ဒီတပါတီ အာဏာရှင် မဆလ ( မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ ) ကိုဖြုတ်ချမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေက အသီးသီးကိန်းဝပ်လာကြတယ်လေ..တခါ ဒီကြားထဲမှာ မဆလ ပါတီညီလာခံလုပ်တော့ ပါတီဥက္ကဌကြီး ဦးနေ၀င်း ( ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း )က လူထုကိုစိန်ခေါ်တဲ့ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တယ်လေ…တိုင်းပြည်မှာ ဆူဆူပူပူလုပ်တဲ့သူမှန်သမျှ သတိနဲ့သာနေကြပေတော့ ..စစ်တပ်ဆိုတာ..မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး..ပစ်ရင်.မှန်အောင်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက..လူထုကိုစိန်ခေါ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်….” နားထောင်နေရာက အားလုံးလှုတ်လှုတ်ရွရွဖြစ်သွားတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်…ချမ်းမြေ့က..
“ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့သူက..ဒီလို လူမိုက်စကားပြောရဲတာ..အံ့ပါရဲ့ဗျာ ”
“ အော်..လူမိုက်ပါဆိုနေမှ..ပြောထွက်တော့မှာပေါ့..” သီရိစုက နှုတ်ခမ်းကိုစူရင်းပြောလိုက်တော့….
“ အဲဒီအချက်ကလည်း လူထုကိုစိန်ခေါ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေ…ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်ပွဲခေါ်သံနေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်..အဲဒီ့ရက်ကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သိပ်လှတဲ့နေ့ပေါ့ သြဂုတ်လ ၈ ရက် ၁၉၈၈ ဆိုတော့ ( ၈.၈.၈၈ ) ဖြစ်နေတာပေါ့..အဲဒီနေ့ကို တနိုင်ငံလုံးလူထုဆန္ဒပြပွဲကြီးကျင်းပဘို့ ရေဒီယိုသတင်းဌာနတွေကတဆင့် ထုတ်လွှင့်လိုက်တယ်လေ….အဲဒီရက်မတိုင်မှီမှာကို နယ်မြို့တချို့မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်လာခဲ့တယ်…သြဂုတ်လ ၈ ရက် ၁၉၈၈မှာတော့ တနိုင်ငံလုံး တောနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လူထုဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့…”
“ အဲဒီ လူထုဆန္ဒပြပွဲက ဘာတွေကိုပြကြတာလည်းဟင် ”
“ ငါကလည်းပြောရင်းနဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာတခုကိုမေ့သွားတယ်…အဓိက အချက်ကတော့
--ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တရားဝင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရေး…ဒါတွေပေါ့ ……”
“ ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးက ကမ္ဘာမှာတော်တော်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ လှုတ်ရှားမှု့ကြီးတခုလို့တော့ ကြားဘူးတာ..အကိုရှင်းပြမှပဲ…ရိုးတိုးရိပ်တိတ်သိတော့တယ်..အစက ဘာမှန်းကိုမသိတာ..”
“ ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကပဲ..အခုမင်းတို့ ငါတို့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်တို့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပဲလေ..” အတန်ကြာငြိမ်နားထောင်နေတဲ့ ကိုသွေးက ကြားဖြတ်ဝင်လာပြီး..
“ ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာ..စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်နော်..ခုထိပဲဆိုပါတော့…ဒီတော့ အကိုရာ ကျနော်မေးချင်တာ..ဒီ အရေးတော်ပုံကြီးကနေ..ဘာတွေများအမြတ်တွေရလိုက်သလည်း…”
“ ကိုသွေး မင်းမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးက သိပ်တန်ဘိုးရှိတယ်ကွ…တကယ်တော့ ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်အာဏာရှင်နဲ့ လက်ပါးစေတွေက ပုံဖျက် မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ခဲ့လို့ တချို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ သို့်လော သို့လော သံသယတွေဖြစ်နေကြတယ်…၈၈ မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ..ဆူပူမှု့မဟုတ်ဘူးကွ..အကြောင်းမဲ့ တိုင်းပြည်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့…အရာလည်းမဟုတ်ဘူး..အရေးအခင်းလည်းမဟုတ်ဘူး..၈၈ ဟာလူထုအရေးတော်ပုံ..လူထုက တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုချင်လို့တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးပါ…ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကနေ တို့တတွေအမြတ်ရလိုက်တာကတော့..တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကို ခင်းပေးလိုက်ရတယ်ကွာ..တပါတီအာဏာရှင် သမ္မတ အဆက်ဆက်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်…ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အသံတနိုင်ငံလုံးညံသွားစေခဲ့တယ်..လူထုရဲ့ကြားမှာ အရင်ကထက် နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှု့တွေ ထက်သန်လာစေခဲ့တယ်….စစ်တပ်က ..အာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပေမဲ့လည်း..သူတို့ပါးစပ်ဖျားကနေ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မဖြစ်မနေသုံးလာရတယ်…နောက်ပြောမယ်ဆို..လူထုရှေ့ဆောင်ပါတီ..အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်..လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါဝင် ခေါင်းဆောင်တွေကို ပေါ်ထွန်းလာစေနိုင်ခဲ့တယ်…တံခါးပိတ်စီးပွားရေးစနစ်ကနေ..တံခါးဖွင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလည်းကျင့်သုံးလာရတယ်…အများကြီးအမြတ်တွေရပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကိုတော့ အရောက်မလှမ်းနိုင်သေးဘူးပေါ့..”
“ ဒါဆို နိုင်ငံရေးလောကမှာပြောပြောနေတဲ့ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဆိုတာကရောဘာကိုပြောတာလည်း…၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးက..အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ကြားဘူးလို့ပါ..”
“ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဆိုကထဲက..တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကို အနုနည်းနဲ့ လူထုအားကိုယူပြီးတော့ပဲ..ကိုယ်လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုခဲ့တာကိုဆိုလိုတာပါ..လက်နှက်ကိုင်တိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး… အကြမ်းဖက်တဲ့ဘယ်လုပ်ရပ်ကိုမှ..တို့မလုပ်ခဲ့ဘူး ” ကျနော့်ရဲ့စကားအဆုံး ထက်အောင်က….
“ ခေါင်းဖြတ်တာတွေ..စက်ရုံတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်နော်..အဲဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း အကိုရ ”
“ ဒီလုပ်ရပ်ကို..နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျောင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေ ဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး..ဒီလိုဖြစ်သွားအောင်လည်း အဲဒီကာလက..အာဏာရှင်တသိုက်က သူတို့အာဏာစွန့်ရမှာဆိုးလို့..အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ.မကောင်းကြံစည်ခဲ့တာပေါ့ကွာ..တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကြီးကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်တယ်လေ…အဲဒီအခါမှာ…သူတို့ရဲ့ လူတွေကိုလွှတ်ပြီး..မင်းမဲ့စရိုက်တွေဖြစ်အောင်..သူတို့ပဲစလုပ်ခဲ့တာပါ….”
“ တော်တော်ယုတ်မာတာပဲနော် ” စန်းမောင်ရင်ထဲမှာခံပြင်းနေပုံရတယ်..အားလုံးက ကျနော့်ရဲ့စကားသံကိုနားစွန့်နေကြရင်း…..
“ ဒီလို မင်းမဲ့စရိုက်တွေကို ဖန်တီးပေးထားမှ..စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရတာကောင်းမှာပေါ့..ဒီယုန်မြင်လို့ ဒီခြုံထွင်တာတွေပေါ့…ဒါရှင်းပါတယ်..တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ..သူတို့ဘာတွေပဲလုပ်လုပ်..၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့..ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေကတော့..ဘယ်သူဖျက်လို့မှ..ပျက်မသွားပါဘူးကွာ…..
အပိုင်း ( ၅ ) ဆက်ပါဦးမည်။
Posted by ကိုအောင် at 10:54
ဗဟုသုတ အဖြစ်နဲ့ ရော သမိုင်းမှတ်တမ်း အနေနဲ့ ပါ လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ်
4 February 2011 at 09:33